Yaa Qalay Adoogay?
Dabadeed hooyodii waxa ay aadi jirtay suuqa si ay uga soo iibsato waxyaabo kasta ee loogu baahnaan karay in cambuulo lagu sammeeyo -- sida digir, lamma kabbo oo sariir macsar ahayd, murxo buneed, kiilo sonkor, caleem shaahi, qorfo iyo heyl, jaawi… iyo alaabo kale. Maalmaha qaarkood, gooraha qaar, mararka ay faraxsanan tahay, waxa ay Absuge ugu qaadi jirtay "digri" ay ka soo baratay Siyaaradii Buubaaye Aw Makanne.
Lix jir oo kale ayuu ahaa; ama se waa uu kaba sii yaraa. Isagu na si aabbehiisii ka geeryooday uu ugu soo dhoweeyo baraako kabkab ahayd; waxa uu aadi jiray Carragaduudda (meel berigeedii loo yaqaannay Dhiigtaarreey: waa meesha maanta ay dhacdo xaafadda Xamar Bile); Carragaduuddu se sidaas ugama sii fogeyn gurigooda; mararka qaarkood dhowr jeer ayuu ba iskaga daba laaban jiray si uu ciid kale uga keeno. Intii tabartiisa ahayd ayuu god yar yaanbo ku faagan jiray; ciidgaduudda na maroogsin ayuu ka soo buuxsan jiray. Madaxa saar ee la dhiikacso! Sidii qof wareersan waxa uu hadba geesaha ula dalanbaabbiyo ba; gurigii ayuu dib u soo tiigsan jiray; badanaaba, waxa uu iman jiray iyada oo ayan hooyo weli ka ba soo laaban suuqii Wardhiigley. Ciiddaas cusboon ayuu dhulkii ku kebbisi jiray.
Hayeeshee labada wadaad af uusan garanayn ayay cabbaaro ku wada daldalmi jireen. Waa dambe ayuu Shii Xanfar weydiiyay afka ay ku wada heesayeen isaga iyo Macallin Fatuuro. Cutushkii ayaa u sheegay in uu ahaa Qur’aan iyo Manaaqib. Si baas ayuu se ugu sii qeexay.
Oday Xanfarkii uu Absuge usha u sidi jiray na waxa yiri, "Wallaahi, tallaahi, leey ilaaha sallalaahu! Fatuuroow. Ba'awga wili si oo faaylan u sii nig dhaw!"
Dhawaaqii Shii Xanfar waxa uu maankii Biyood u tebiyay farriimo gacmaheeddii ka dhigay nacabkii u labaddibleyn lahaa wadaad u oomanaa dhiigga wiilkeedii. Hooyo si mintid ahayd ayay ugu qabqabatay, ugu na dhigaysay halgaadihii Aw Fatuuro uu Absuge ku jiidi-jiidii lahaa.Balowgii ayaa ka dhammaaday, wiilkii. Absuge se, waa ku ayaankaas! Nasiib badnayaa se!
Haddiiba waxa gurigii mar soo wada galay adeer Faralle, adeer Jeesgooye, iyo adeer Diraac. Buuqii ka dhacay lagama wada sheekeyn karo. Ogow se, Aw Fatuuro dib dambe in uusan u imaan karin gurigaas ayaa si cad loogu sheegay.
Hal wax ayuu Absuge weligiiba se dareensanaa. Aabbehiisii loogu sheegay in uu guriga wax ka joogay ayuu intaas u cabanayay. Warcelin yar na kama uu helin. Waxtar na kama helin. Ciidan na kama helin. Dadnimo na kale, taas haba sheegin. Waxba isuma ayan ba ahayn. Aabbehaas dhintay. Absuge waxa uu ka qoomameeyay ciiddii uu dartii u soo qoday, u na soo daldalay… iyo gurigii uu awgii u hagaajiyay ba. Abbe wax-ma-tare ahaa.
"Orgi raaya-dheeraa waa iniid baarlawaanka [suuliga] u khashid; haddii taaseeti ka bihi karinne, diiqoo ne allaa ka dhigee, muqsusha inii dhiiggoo luwu bafiyo [rusheeyo] waaye."
Sidaas daraaddeed, maalin maalmaha ka mid ahayd, Oday Duurdaye waxa uu doonayay musqushiisii cusbayd in uu diiq ugu waqdhaacimo.
Waxa ahayd lix-jirkii Absuge kahor. Berigaa isaga ahaa, berigaas dhiigga la qubi lahaa, ayuu Absuge la kulmay Oday Duurdaye oo weli u middi sahanayay si uu diiq-dooro u bireeyo. Markii ugu horreysay noloshiisa ayuu arkay diiq madaxbeelay oo iskaga daba wareegayay sidii in uu ka caweynay goob shabashabo. Laakiinse, haddana waxa uu arkay isla haddiiba sida biyo karkarayay haddana loo dhex kuday, dabadeed na baalashii lagaga sii wada rifayay, loo xuubsiibay, cadcad na loogu sii jarjarayay. Haddii se uusan arki lahayn tifidda iyo jarjarka diigga lagula sii kacay, waxa uu iska rumaysnaan lahaa in diiqu na dib ugu soo kici lahaa sidii Axabeeygii suuxsuuxi jiray oo kale.
Awgii go'aankaas uu qaatay, maalin maalmaha ka mid ahayd, faylasuufkii yaraa, Absuge, agoonki Cabbeey Makaraan, halyay qaangaaray, waxa uu hooyo Biyood weydiiyay:
"Ii sheeg! yaa qalay adoogay? Ma Duurdaye mise wed kale?"…